Sida Loogu Wareejiyo Bartaada Wordpress Bogga Cusub | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 26, 2019 Talaado, Nofeembar 26, 2019 Douglas Karr
Markaad ku shaqeyneyso boggaaga WordPress hal marti-geliye oo aad u baahan tahay inaad u wareejiso mid kale, ma ahan sida ugu fudud ee aad u maleyn karto. Tusaale kasta oo ka mid ah WordPress wuxuu leeyahay 4 cunsur… kaabayaasha dhaqaalaha iyo cinwaanka IP waxaa lagu martigaliyay, ah MySQL database ka kooban waxa ku jira, ee la soo raray faylasha, mawduucyada iyo wixii la mid ah, Iyo WordPress laftiisa.
WordPress wuxuu leeyahay qaab soo dejin iyo dhoofis, laakiin wuxuu ku xaddidan yahay waxyaabaha dhabta ah. Ma ilaalineyso sharafta qoraaga, mana guurineyso xulashooyinkaaga - kuwaas oo udub dhexaad u ah rakibid kasta. Sheeko dhaadheer short waa xanuun dhab ah!
isticmaalka BlogVault, Waxaan ku rakibey sheyga barta aan ka soo xigtay, waxaan ku daray cinwaankayga iimaylka ah ee ogeysiisyada, ka dibna waxaan galiyay URLkeyga cusub iyo aqoonsiga FTP. Waxaan guurey tahriib… daqiiqado yar kadib waxaan kujirey emayl sanduuqa sanduuqa in goobta la haajirey.
Macno ahaan maahan inaan wax sameeyo… dhamaan xulashooyinka, isticmaaleyaasha, feylasha, iwm. Waxaa si habsami leh loogu haajiray serverka cusub! Marka laga soo tago qalabkooda socdaalka ee cajiibka ah, BlogVault waa adeeg gurmad oo buuxa oo waliba bixiya astaamo kale:
Tijaabin Dib-u-Celin - Ma rabtaa inaad dib ugu noqoto noocii hore ee boggaaga? Laakiin sidee ku ogaan kartaa in taasi dhab ahaantii tahay mid sax ah? BlogVault waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku shubto nooca xulashada ee xulashada mid ka mid ah adeegeyaashooda tijaabada ah waxaadna arki kartaa inay u shaqeyneyso sida degel dhab ah.
Soo Celinta Gawaarida - Macno malahan haddii websaydhkaagu waxyeelleeyo, ama khalad bani'aadam ah uu dhaliyo guuldarro, BlogVault ayaa had iyo jeer garab istaagi doonta si ay si dhakhso leh cagahaaga dib ugu soo celiso. Muuqaalka otomaatiga ah ee loo yaqaan 'Auto-Restore' ayaa si otomaatig ah dib ugu soo celiya kaydinta adeegaha saacadda aad u baahan tahay, iyadoon loo baahnayn faragelin gacan qabasho ah.
Ammaanka - BlogVault wuxuu dammaanad qaadayaa 100% badbaado iyadoo la keydinaayo nuqulo fara badan oo keyd ah meel ka madax banaan websaydhkaaga. Kaydintaada, oo la xareeyay, waxaa lagu keydiyaa xarumaha xogta aaminka ah iyo sidoo kale server-yada Amazon S3. Si ka duwan isticmaalka caadiga ah ee loo yaqaan 'Amazon S3', ma keydsadaan aqoonsiyada qayb ka mid ah goobta, taas oo yareyneysa wixii haakis ah.
History - BlogVault waxay haysaa 30 maalmood taariikhda keydkaaga si aad ugu laaban karto midkoodna waqti kasta oo aad rabto.
hayaan - BlogVault wuxuu qaataa habab koror ah oo loogu talagalay keydinta, soo celinta iyo geeddi-socodka socdaalka. Iyadoo aan loo eegin haddii BlogVault uu haajiro, dib u soo celiyo, ama dib u soo celiyo degel, waxay kaliya ku shaqeynayaan wixii isbeddelay tan iyo markii ugu dambeysay ee isku xirnaanta. Tani waxay badbaadinaysaa waqti iyo xawaareyn ballaadhan.
Saxiix u qor BlogVault
Bixinta: Waxaan ku xiran nahay BlogVault.
Tags: blogvaultsida loosida wordpress loogu wareejiyo domain cusubsida loo wordpresshaajiraan WordPressdhaqaaq wordpresswareejinta wordpressWordPress
Daraasado Kiis ah oo loogu talagalay Suuqgeynta: Ma Noqon Karnaa Daacad?